Uma siqala ukusebenzisa ucingo oluthile, ngezinye izikhathi asazi ukuthi singabheka kanjani ibhalansi yeselula.
Ngenxa yalesi sizathu namuhla sethula wena i izindlela ongakwenza ngazo ezinkampanini ezahlukene.
Hlola ibhalansi yeselula: Kwenziwa kanjani?
Landela lezi zinyathelo ngocingo ngalunye ngokuya ngale onayo:
Hlola ibhalansi ku-Movistar
Uma usebenzisa i-Movistar telephony futhi ungazi ukuthi ungayibheka kanjani ibhalansi yakho yeselula, ungakwazi kwenze mahhala futhi ubone usuku lwayo lokuphelelwa yisikhathi endaweni yakho yangasese kuwebhusayithi ye-Movistar (Yenza chofoza lapha ukungena). Ukuze wenze lokhu, kufanele ukhethe umugqa wakho okhokhelwe kusengaphambili.
Enye indlela okufanele uhlole ukunyakaza kwakamuva ngokusebenzisa i- Uhlelo lwami lwe-Movistar noma shayela * 133 # bese ucindezela inkinobho yokushaya ucingo. Izindleko zalokhu kubonisana ngu-€ 0,15 I-VAT ayifakiwe
Hlola ibhalansi yakho yamahhala kuVodafone
Uma udinga ukwazi ungayibheka kanjani ibhalansi kuVodafone yakho futhi awunakho uxhumano lwe-inthanethi, ungakwenza ngomlayezo wombhalo. Kodwa khumbula ukuthi lokhu kungenzeka kuphela uma ucingo lwakho lukhokhelwa kusengaphambili.
Ukuze wenze lokhu, kuzodingeka uthumele umlayezo wombhalo enombolweni ethi 22134 enekhodi ethi "Balance" futhi uzothola enye i-SMS lapho ungafunda khona ibhalansi yakho.
Enye indlela ongayenza hlola ibhalansi yeselula Ngokufaka * 134 # bese ucindezela inkinobho yokushaya ucingo. Uma udinga ukuhlola indlela osebenzisa ngayo iVodafon kufanele ushayele *131 # bese ucindezela inkinobho yokushaya ucingo.
Ekugcineni, enye indlela ongabheka ngayo ibhalansi yakho ukudayela * 123 # bese ucindezela ukhiye wokushaya; kulandelwa, kuzodingeka ushayele u-1 kanye nokhiye wokushaya, ngokucindezela u-1 futhi uzokwazi ukuhlola ukusetshenziswa kwakho kwedatha namabhonasi.
Uzothola umlayezo wombhalo onebhalansi, izindleko zale sevisi ngu-€ 0,18 kuhlanganisa ne-VAT.
Hlola ibhalansi yeseli ye-Claro
Uma ucingo lwakho kuyi-Claro, ukuze uhlole ibhalansi ungakwenza ngomlayezo obhaliwe noma ngokushaya ucingo.
Okokuqala kufanele uthumele i-SMS enegama elithi BALANCE ku-555 futhi uzothola enye nebhalansi yakho enemininingwane.
Uma unolayini wefoni okhokhelwa ngaphambili, unezinketho ezimbili. Eyokuqala iwukufaka isicelo se-Claro bese ukhetha ithebhu ethi “prepaid” bese kuthi “Balance and use”. Uzokwazi ukubona ngokuningiliziwe konke ukusetshenziswa okwenzile.
Ungashayela futhi * 611 bese ulandela izinyathelo ezibonisiwe.
Hlola ibhalansi More Mobile
Ungakwenza ngokusebenzisa indawo yeklayenti lakho ku iwebhusayithi kusuka eMás Móvil noma ngokuqondile kusuka kuhlelo lokusebenza.
Uma unolayini okhokhelwa ngaphambili, ungabheka ibhalansi yakho yeselula ngokufaka * 113 # kumakhalekhukhwini wakho bese ucindezela inkinobho yokushaya ucingo.
Hlola ibhalansi ye-Digi Mobil
Ungadayela u-*134 # bese ucindezela inkinobho yokushaya ukuze uthole ulwazi mayelana nebhalansi yakho. Uma ufisa thintana ngokuqondile nokusebenzisa kwakho amamegabhayithi, kufanele ushayele *134 #.
Enye inketho etholakalayo ukufinyelela indawo yangasese ye-akhawunti ye-DIGI Mobil ngokusebenzisa lesi sixhumanisi
Hlola ibhalansi ye-Lycamobile
Ukuze uhlole ibhalansi yeselula faka * 221 # (noma 94 #), khetha thumela futhi ungakwazi bona ibhalansi esikrinini sakho seselula. Ungashayela futhi ku-221 (noma 95 #).
Phezulu kuselula » Izinkampani » Hlola ibhalansi yeselula Sichaza ukuthi kwenziwa kanjani isinyathelo ngesinyathelo!